सातामा ५९.८६ अंकले नेप्से बढ्दा कुन कम्पनीमा आकर्षित भए लगानीकर्ता ? | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण सातामा ५९.८६ अंकले नेप्से बढ्दा कुन कम्पनीमा आकर्षित भए लगानीकर्ता ?
on: April 26, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
सातामा ५९.८६ अंकले नेप्से बढ्दा कुन कम्पनीमा आकर्षित भए लगानीकर्ता ?
वैशाख १२, काठमाडौं (अस) । नेप्से परिसूचक गत साताको तुलनामा ५९ दशमलव ८६ अंकले बढ्न पुगेको छ । गत साताको अन्तिम दिन वैशाख ५ गते १ हजार २३२ दशमलव २६ विन्दुमा बन्द भएको परिसूचक वैशाख १२ गते १ हजार २९२ दशमलव १२ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । सातामा पाँच दिनको कारोबारको तुलनामा नेप्से परिसूचक २७ दशमलव ७२ अंकले बढेको छ ।
आइतवार वैशाख ८ गते १ हजार २६४ दशमलव २० विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक बिहीवार १ हजार २९२ दशमलव १२ विन्दुमा बन्द भएको हो । गत साताको तुलनामा बजार पूँजीकरण रू. ७२ करोड बढ्न पुगेको छ । गत साताको बिहीवार वैशाख ५ गते रू. १५ खर्ब २८ अर्ब रहेको बजार पूँजीकरण वैशाख १२ गते बिहीवार रू. १६ खर्ब १ अर्ब पुगेको छ । यस सातामा बैंकिङ, विकास बैंक, बीमा, लघुवित्त समूहका कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढेपछि नेप्से बढ्न थप सहयोग पुगेको हो ।
सातामा भएको कारोबार
यस सातमा १ करोड ६२ लाख ७९ हजार २१४ कित्ता शेयरको रू. ४ अर्ब ९८ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । गत सातामा रू. २ अर्ब ६२ करोडको शेयर कारोबार भएको थियो । गत साताको तुलनामा कारोबार रकम रू. २ अर्ब ३६ करोड बढी हो । गत सातामा भएमा चार दिन शेयर कारोबार भएको थियो भने यस सातामा पाँच दिन कारोबार भएको थियो जसले कारोबार रकम बढ्न पुगेको हो । यस सातामा तीनदिन रू. १ अर्बभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको थियो ।
गत साताको तुलनामा यस सातामा उपसमूहमा आएको वृद्धि
सातामा बजार बढ्नुको कारण यस्तो
सातामा नेप्से परिसूचक २७ दशमलव ९२ अंकले बढ्न पुगेको छ । बजार माथि जानको लागि हाल प्रकाशित भइरहेको तेस्रो वित्तीय विवरणको प्रभाव देखिन्छ ।
वैशाख लागेसँगै नेप्से परिसूचकमा वृद्धि आएको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजानिक गरिरहेका छन् । ति कम्पनीहरुले नाफा कमाएको विवरण आएपछि आउने आवमा राम्रो लाभांश दिने अनुमानले शेयर बजार बढ्न पुगेको हो । चैतसम्म वियरिश रहेको बजार वैशाख लागेसँगै वुलिस भएपछि लगानीकर्ताहरु बजार छिरेको अनुमान गरिएको छ । वुलिस बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरु पनि प्रवेश गरेको ब्रोकरले बताएका छन् । विभिन्न कम्पनीहरुको आइपीओ आइरहेकाले पनि नयाँ लागनीकर्ताहरुलाई बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन पुगेको हो ।
हाल बजारले नेप्सेले १३ सय विन्दुको मनोवैज्ञानिक परीक्षण गरिरहेको छ । बजारले १३ सयको मनोवैज्ञानिक परीक्षण पार गरेमा बजार अझै बढ्न अनुमान विश्लेषकहरुले गरेका छन् । बढेको बजारमा केहि लगानीकर्ताहरूले नाफा बुक गर्न आएका छन् भने कम मूल्य पर्ने कम्पनीका शेयर खरीद गरी कित्ता बढाउने लागनीकर्ताहरु पनि छन् । जसले बजारलाई धेरै माथि जान र तल जान रोकेको छ ।
सातामा सर्वाधिक कारोबार भएका कम्पनीहरु
सातामा सर्वाधिक शेयर कारोबार हुनेमा नौ वाणिज्य बैंक परेको छ भने एक छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था परेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको नाफा मुलक विवरण आएपछि लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएका हुन् । सातामा नेपाल, बैंक, प्रभु बैंक, एनआइसी एशिया, एनएमबि बैंकहरु लगानीकर्ताहरूको रोजाइमा परेको हुन् ।
सातामा सर्वाधिक बजार पूँजीकरण भएका कम्पनीहरु